Banyere Anyị - Wistron Industrial Limited
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Wistron Industrial Limited
Companieslọ ọrụ zuru oke na -ejikọta ụlọ ọrụ na azụmaahịa
E hiwere Beijing Wistron Technology Ltd. na 2012. bụ ụlọ ọrụ zuru oke na -ejikọ ụlọ ọrụ na azụmaahịa. Ọ bụ ụlọ ọrụ zuru oke na -elekwasị anya na nyocha na mmepe, mmepụta na ire nke ụlọ ọrụ ngwaahịa nchekwa nchekwa okporo ụzọ anyanwụ na akụrụngwa okporo ụzọ ndị metụtara ya. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere akwụkwọ ikike ngwaahịa, yana sistemụ njikwa mma ISO9001 zuru oke na sayensị, ngwaahịa agafeela CE, ROHS, FCC, IP68 na asambodo ndị ọzọ, yana kwekọrọ n'ụkpụrụ European na American ASTM D4280 na EN1463-1. .
Ọkachamara ngwaahịa R&D otu
Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị otu R&D ngwaahịa siri ike ma bụrụ ọkachamara, a ga-ejikwa 40% nke uru kwa afọ maka teknụzụ R&D ma kwadebere ya na ntinye na ntinye nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-enweghị uzuzu 1000 square. Ọ nwere sistemụ njikwa siri ike na nke zuru oke na akụkụ, mmepụta na njikwa mma, nke na -enye nkwa a pụrụ ịdabere na ya maka usoro nnyefe, njikwa mma na ọnụego ngafe dị elu.
Ogo, iguzosi ike n'ezi, nchekwa na ike ịchekwa onye ahịa
Anyị na -arụsi ọrụ ike na ụlọ ọrụ ahụ, na -ejigide ụlọ ọrụ ahụ, ma na -agbaso ntuziaka nke "ịdị mma, iguzosi ike n'ezi, nchekwa na ịchekwa onye ahịa mbụ". Ugbu a, ebupụla ngwaahịa ndị a na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Europe na America, Middle East na Australia, Africa, South America na ọtụtụ narị mba na mpaghara ndị ọzọ.
Ezi obi, Nraranye, Nhazi, Innovation
Wistron na -ebu mmụọ ụlọ ọrụ nke ezi obi, nraranye, nchikota, imepụta ihe n'uche mgbe niile, ọ ga -agbakwa mbọ imeju ndị ahịa okporo ụzọ ike anyanwụ na imeri oke ahịa yana ibelata oriri ike ụwa niile n'ụbọchị na -abịa. Ebumnuche anyị bụ ka anyị na ndị mmadụ nọ n'akụkụ ụwa niile wulite mmekọrịta azụmaahịa ogologo oge na -erite uru, anyị ga -enwe ekele maka kọntaktị gị, daalụ nke ukwuu!